မြန်မာ့တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနေသောရွှေခရု - Thutazone
ရေးသားသူ – ဧရာဝတီ ငဘ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစပါးအိုးကြီးလို့တင်းစားထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဓိကစပါးစိုက်ပျိုးရာမြို့နယ်အများစုမှာ ရွှေခရုလို့ ခေါ်တွင်တဲ့ သီးနှံဖျက်ခရုတစ်မျိုးကြောင့် မိုးစပါးစိုက်ဧက သောင်းနဲ့ချီပီး ပျက်စီးကုန်ပါပီ။ ဒီခရုဟာ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစပါးစိုက်ပျိုးရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မွန်ပြည်နယ် စတဲ့ဒေသအထိအောင် လျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပီး စပါးပင်များကိုဖျက်ဆီးကာ နိုင်ငံ့စားနပ်ရိက္ခာကို စတင်ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။
ဒီခရုစတင် ဝင်ရောက်လာစဉ်ကတည်းက သက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့ တောင်သူလယ်သမားများ သိရှိပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ဟန့်
တားမှုတွေကို ဖိဖိစီးစီးမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် အခုဆိုရင်တော့ လုံးဝတားဆီးလို့မရနိုင်တော့တဲ့ “ အမျိုးသားရေးအန္တရာယ် အရေးပေါ်
အဆင့်ကို စတင်ကျရောက်နေပါပီလို့ ´´ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို သတိပေးလိုက်ပါရစေ။
ဒီခရုဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်မှာ ဧရာဝတီ/ရန်ကုန်/ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ မွန်ပြည်နယ် သေအချို့မှာ အနည်းအကျဉ်းသာတွေ့ရှိရပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ကုန်ပါပီ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကို လျင်မြန်တဲ့ပြန့်နှံ့မှုနဲ့ ပေါက်ပွားနှုန်းဟာ တကယ်ကိုကြောက်စရာပါ။နေရာတနေရာမှာတစ်ကောင်စ နှစ်ကောင်စတွေ့ရာကနေ တစ်လအတွင်းအကောင်ရေသိန်းချီပီး မြင်တွေ့နေရတာ သူ့ရဲ့သဘာဝပေါက်ဖွားနှုန်းပါ။
သက်ဆိုင်ရာက ရွှေခရုကိုနှိမ်နှင်းဖို့ ထုတ်ပြန်ပြန်ပေးနေပေမယ့်လည်း နည်းပညာလိုအပ်ချက်ကြောင့် ပေါက်ဖွားနှုန်းအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ ဒီခရုနတ်ဆိုးကို ထိထိရောက်ရောက် မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီခရုကို အမြစ်ပြတ်အောင်နှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ အစ္စရေး အမေရိကန် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်နိုင်ငံလို စိုက်ပျိုးရေးရေးအဆင့်မြှင့် နည်းပညာသုံးစွဲနေတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကို မဖြစ်မနေတောင်းရတော့မှာပါ။ တရုတ်ရဲ့ နည်းပညာကိုတော့ မယူစေလိုပါ။ ရွှေခရုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာ တရုတ်ဟာသံသယဖြစ်ဖွယ် အနေအထားတစ်ရပ်ကိုတွေ့ရှိထားလို့ပါ။
ဘာကြောင့်ရွှေခရုအန္တရာယ်ကို လယ်သမားတွေကြောက်နေကြရတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ ရွှေခရုပြန့်ပွားနေတာကို အမျိုးသားရေး
အန္တရာယ်တခုလို့ သတ်မှတ်ရမှာလည်း ?
ရွှေခရုဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလည်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
“ရွှေခရု (သို့) စပါးဖျက်ခရု (သို့) Golden Apple Snail”
ပထမဦးစွာ Golden Apple Snail ကို ရွှေခရုဟု ခေါ်ပါမည်။ ဘာလို့ ဒီလို ပြောရလဲ ဆိုရင် အချို့သော တောင်သူများသည် သူတို့၏ လယ်များကို ဖျက်ဆီးသော ၎င်းခရုကို ရွှေလို့တပ်ခေါ်ခြင်းကို မကြိုက်သော သူများအလည်း ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေခရု၏ မူရင်းဒေသသည် တောင်အမေရိကတိုက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှစ၍ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှတဆင့် အာရှနိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံလာခဲ့ပါသည်။ ပျံ့နှံ့ရာ အကြောင်းရင်း များမှာလည်း ကျေးလက်နေပြည်သူများ စားသုံးရန် နှင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိရန်အလို့ငှာ တင်ပို့ရောင်းချရန် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း များမှ စတင်တင်သွင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တော့ ခရုဖြင့် ပေါင်းနှိမ်နှင်းရန်(Biological Control of Weeds by GAS) ကြိုးစားရာမှ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး အချို့နိုင်ငံများတွင် အလှမွေးရန် တင်သွင်းခဲ့ရာ (Aquarium trade) မှ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ရပါသည်။
ရွှေခရု တင်သွင်း ပျံ့နှံ့ဖျက်ဆီးရာဒေသ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ရွှေခရုသည် စားသောက်ရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အလှမွေးရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ရေမှော်များ (aquatic weeds) များကို နှိမ်နင်းရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွက်ချက်ရှိရှိ လူများမှ တဆင့် တင်သွင်းယူဆောင်လာခဲ့မှုများ ရှိသလို သံလွင်မြစ် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများကဲ့သို့သော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်လည်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပျံ့နှံ့လျက် ရှိပါသည်။
ရွှေခရုသည် ၎င်း၏မူရင်းဒေသတွင် သီးနှံဖျက်ပိုးမဟုတ်ပဲ အာရှအပူပိုင်း ဒေသများသို့ ရောက်မှ အဓိကဖျက်ပိုး ဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသတွင် တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးမျိုးပွားနိုင်ခြင်း၊ ဥမှ အကောင်ပေါက်နှုန်း ကောင်းခြင်း (၉၀%ခန့်)၊ ရေနေအပင် အတော်များများကို စားသောက်နိုင်ခြင်း၊ မြစ်များ၊ ချောင်းများ၊ ရေသွင်း/ထုတ်မြောင်းများမှ ကူးစက် ပျံ့ပွားလွယ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် စပါးခင်းအခြေအနေသည် ၎င်းခရုကြိုက်နှစ်သက်သော နေရာ အခြေအနေဖြင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ ရေမရှိသော်လည်း (၃)လလောက်ထိ အသက်ရှင်လျက် မြေအောက်တွင် ခိုအောင်းနေနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းခရုသည် ရေထဲတွင် နေနိုင်ရန် ပါးဟက် (gill) များ ပါရှိသည့်အပြင် ရေမရှိသော အခြေအနေတွင် အသက်ရူနိုင်ရန် အဆုတ်များပါရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ရောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် မြန်မာ အပါအဝင် အာရှနိုင်ငံများတွင် စပါးသီးနှံများ၏ အဓိကဖျက်ပိုး ဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်။
ရွှေခရု၏ ဖျက်ဆီးနိုင်မှုသည် စိုက်ခင်းတွင် ရေအနည်းအများအပေါ် အဓိက မူတည်ပါသည်။ ရွှေခရုသည် စိုက်ခင်းတွင် ရေမရှိပါက၊ ရေထုတ်ထားနိုင်ပါက စပါးပင်ကို မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ စိုက်ခင်းတွင် ရေများနေပါက ဖျက်ဆီးမှု ပိုများပါသည်။ စပါးပင် ငယ်စဉ်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပြီးကာစ ကောက်ပင်လှန်ချိန်၊ အရွက်နုများထွက်ချိန်တွင် ဆိုးဆိုးရွားရွားဖျက်ဆီးပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ခရုသည် စပါးရွက်နုများကို ညဘက်နှင့် နံနက်စောစောအချိန်များ၌ စပါးပင်ပေါ်တက်၍ (သို့) စပါးပင်ခြေမှ ကိုက်ဖြတ်စားသောက်ပါသည်။ နေ့ခင်းဘက်အချိန်များတွင် သမန်းပြင်အောက် (သို့) ရေအောက်များတွင် ခိုအောင်းနေပါသည်။
ရွှေခရုသည် ပန်းရောင်ဥများကို ရေမျက်နှာပြင်အထက် စပါးပင်စည်ပေါ်၊ သစ်ကိုင်းပေါ်၊ အိမ်တိုင်များ၊ ရေနှင့်လွတ်ရာ နေရာတော်တေ်ာများများတွင် အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ဥပါသည်။ ဥမြုံတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ဥပေါင်း ၅၀၀ နှင့် အထက်ပါရှိပြီး ဥမှ ပေါက်နှုန်းမှာလည်း ၉၀% ခန့် ရှိသောကြောင့် ပွားများမှု များသော ဖျက်ပိုးဖြစ်ပါသည်။ ဥမှ ၁၄ရက်ခန့်အကြာတွင် ပေါက်လာသော အကောင်ငယ်သည် ၂လခန့်တွင် စတင် မိတ်လိုက်၊ မျိုးပွားနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ရွှေခရုသည် အာရှနိုင်ငံများ၊ အပူပိုင်းဒေသများတွင် တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးမျိုးပွါးနိုင်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံး ပန်းရောင်ဥမြုံများကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ စပါးပင် မရှိသော အချိန်များတွင်လည်း ရေမြောင်းများ၊ ချောင်းများ၊ ရေအိုင်များသည် ၎င်း၏ အဓိက မျိုးပွားရာနေရာများဖြစ်ပါသည်။
ရွှေခရုသည် စပါးပင်ကို အဓိက ဖျက်ဆီးသော်လည်း စပါးအပြင် အခြားရေနေအပင်များစွာကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ဥပမာ-ကန်ဇွန်း၊ ကြာ၊ စပါးရိုင်း၊ မြက်၊ ဗေဒါ၊ သင်္ဘောရွက်၊ ပိန်းဥ၊ စသည့် အရည်ရွှမ်းသော အပင်၊ အရွက်များကိုလည်း ကြိုက်ပါသည်။ ထိုပြင် စားစရာမရှိပါက ရေညှိရေမော်များကိုလည်း စားသောက်ပါသည်။
အခုလက်ရှိဧရာဝတီတိုင်းလို ရေလွှမ်းနေတဲ့ ကျေးရွာတချို့ရဲ့စပါးစိုက်လယ်မြေတွေမှာ လယ်သမားတစ်ဦးကို တစ်ညစပါးစိုက်ခင်း နှစ်ဧကကနေ ဆယ်ဧကအထိဖျက်ဆီးခြင်းခံနေရပါတယ်။ အခုလို ခရုဖျက်ဆီးနေခြင်းအပေါ် ဧရာဝတီတိုင်း ကျိုက်လတ်မြို့နယ် ကျွဲကူးခရားရိုးကျေးရွာက လယ်သမားကြီးဦးတင်စိုးက အခုလိုသူ့ကြုံတွေ့ရတာကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျနော်မနေ့ကညနေတုန်းက လယ်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမနက်လယ်ထဲကိုကျနော်ရောက်တော့ နှစ်လသားရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော်မိုးစပါး ၇ဧကစလုံး ဒီခရုတေကိုက်လို့ဘာမှကိုမရှိတော့ပါဘူး။ အခုတော့ ရေပြင်ကြီးပဲကျန်တော့တယ်။ တစ်ညတည်းကို ဖျက်ဆီးပစ်တာ ကျနော်လိုဘဲ တခြားလယ်သမားတွေလည်း ဧကရာနဲ့ချီပြီး ဒီခရုကြောင့်ပျက်ဆီးကုန်ပါပြီ ´´ လို့ကြေကွဲစွာပြောပြပါတယ်။
အခုဆိုရင် ခရုကြောင့်ပျက်ဆီးခဲ့တဲ့ လယ်သမားတွေစုပေါင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်ကတဆင့် အစိုးရကိုတင်ပြပြီး နည်းပညာအကူအညီတွေ ဆွေးနွေးတောင်းခံသွားမယ်လို့သူကဆက်ပီး ဆိုပါတယ်။
အခုဆိုရင် တောင်းသူလယ်သမားတွေအနေနဲ့ နိိုင်ငံတော်အစိုးရကို လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီး
အကြွေးမဆပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် နှစ်နဲ့ချီပီးမဆက်နိုင်ကြသေးပါ။ အခုလိုလိုဖြစ်ရတာဟာ ဒီရွှေခရုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လို့ အများစုကဆိုကြပါတယ်။ ကွဲလွဲချက်တချို့ရှိနေနိုင်ပေမယ့်လည်း နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လျစ်လျူပစ်မထားသင့်ပါဘူးနည်းလမ်းရှာကြံပြီး အဖြေရှာပါမှ အန္တရာယ်ကို ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ဆန်စပါးကိုအဓိက စားသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အခုလိုဆန်စပါးအဓိကထွက်ရှိရာ ဒေသတွေမှာ သီးနှံပျက်စီးမယ့် အန္တရာယ်ကျရောက်ပီဆိုပါက နိုင်ငံအတွက်တွေးတောင်မတွေးဝံ့တဲ့ အမျိုးသားရေးအန္တယ်ရာယ်ဆိုးကြီးပါ။ ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ချာလည်ရိုက်နေတဲ့ကျနော် တို့နိုင်ငံမှာ တကယ်လို့ကပ်ဆိုးကြီးကျရောက်လာပါက ပြည်ပကနေရေရှည် စားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အနေအထားတစ်ရပ်ပါ။
အီသီယိုးပီးယား ဆိုးမာလီးယား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကပ်ဆိုးကြောင့်အငတ်ဘေးသင့်ခဲ့တာကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်နေပါပီ။ ရွှေခရုအန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့ ဒေသတွေကိုသေချာကွင်းဆင်းလေ့လာဖို့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို လွှတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ ဆန်ကို ပြည်တွင်းမှာလုံလောက်မှုရှိမရှိ တွက်ချက်ပြီးမှပြည်ပကို တင်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရွှေခရုအန္တရာယ် ဘယ်လောက်အထိကြီးမားသလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အစိုးရကို ထပ်ပီးတော့ အကြံပေးချင်တာ…“ သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ … ´´
ဒီစာလေးကို ဖတ်ပီးသွားရင် ဘယ်ဒေသတွေမှာ ရွှေခရုအန္တရာယ် ဘယ်လောက်အထိ ပြန့်နှံ့ကျရောက်နေပီလဲ ကောမန့်မှာ ဝင်ရောက်ရေးသားအကြံပြုပြီး ဖြန့်ဝေပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
အောက်က ဗီဒီယိုကတော့ ဒီခရုဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစိုက်ခင်းတွေကိုလည်း ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အကြောင်းရှင်းပြထာတာပါ။
Tags: knowledgeto know